BBC Somali - Warar - Dhawr iyo toban qof oo ilaa hadda ku dhintay qaraxyo ismiidaamin oo ka dhacay Muqdishu
Dhawr iyo toban qof oo ilaa hadda ku dhintay qaraxyo ismiidaamin oo ka dhacay Muqdishu
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 20 September, 2012, 18:25 GMT 21:25 SGA
Ilaa 14 qof ayaa ku dhintay, in ka badan labaatanna way ku dhaawacantay laba qarax oo ismiidaamin ah oo caawa isku mar ka dhacay huteel Village oo u dhaw tiyaatarkii magaalada Muqdishu. Waraka muqdishu waxay sheegayaan inay laba qof oo ismiidaaminayaa ay ku kaceen falkaasi, xilli ay halkaasi ku sugnaayeen dad badan oo rayid ah oo u badan dad qurbajoog ahaa oo ka tegey debadda, suxufiyiin iyo saraakiil ka kala tirsan dawladda iyo baarlamaanka.
Dadka dhintay waxa la ogyahay inay ku jireen suxufiyiin qaarkood ka tirsanaayeen idaacadaha iyo telifishannada.
Huteelka lagula kacay qaraxani, oo ilaa hal kilomitir u jira madaxtooyada, waxa lahaa nin ka mid ah dadka qurbajoogga ah oo ka tegey dalkan Ingiriiska.
Toddobaadkii horena, waxa weerar noocani oo kale ah lagula kacay Huteel Jazeera oo ku dhaw garoonka diyaaradaha, halkaasi oo waqtigaas uu ku sugnaa madaxweynaha cusubi, mudane Xassan Sheekh Maxamuud.
Ajnebi ayaa ka mid ah dadka dhintay
Maraykanka oo la hadlaya Taalibaan
Burcad badeedda Soomaaliya oo laga batay
Isku xirayaasha BBC Mobile ahaanShuruudaha adeegsigaKu saabsan BBC Nagu xayaysiisoSiyaasadda xog dhowriddaCaawinta adeegga Nala soo xiriir BBC © 2013 BBC mas'uul kama aha waxa ku qoran boggaga aan BBC ahayn. Boggan waxaa sida ugu wanaagsan loogu daalacan karaa qaab waqtiga la socda iyadoo la adeegsanayo waraaqaha qaabaysan ee (CSS). Adigoo awoodi doona in aadqaabka aad hadda isticmaalayso ku aragto bogga waxa ku qoran, hadana si buuxda ma kuugu muuqan doono. fadlan ka fakar in aad badasho barnaamijkaaga wax baaridda (browser) ama in aad kordhiso awoodda waraaqaha qaabaynta ee (CSS) hadii aad sidaa yeeli karto. ]]> Boggaga Englishka ee BBC: Three navigation lists follow: Full A-Z of BBC sites News Sport Weather Languages TV Radio ]]>